Champions League final: Xogo Muhiim Ah
HomeChampions LeagueChampions League final: Xogo Muhiim Ah
Waxaynu halkan ku soo koobi doonaa, xogaha aad moog tahay ee akhrista aad uga baahan tahay guud ahaan horyaalka ugu xiisaha badan dunida kubada cagta ee Champions Laegue oo caawa ciyaartiisii ugu dambeysay ee Gebo-gabada ay ku kulmayaan labada naadi ee isku wadanka iyo isku magaaladaba ah ee Real Madrid iyo Atletico Madrid garoonka ku yaala caasimada wadanka Portaqiiska ee Lisbon, garoonkaas oo lagu magacaabo Stadium of Light.
Dhacdooyinkaas ugu xiisaha badan oo aan idiin soo koobnayna waa kuwan:-
Horyaalkan caawa ciyaartiisii u dambeysay la ciyaarayaa, wuxuu noqonayaa kii 59 aad ee tan markii la bilaabay horyaalka naadiyada Yurub, xili ciyaareedkii 1955-56.
Real Madrid ayaa ku guulaysatay shanti horyaal ee ugu horeeyayba, waxaanay haysataa rikoodhka naadiga ugu guulaha badan, iyadoo hanatay 9 koob oo champions League ah, haddii ay caawa guulaysatana noqon doonta keedii 10 aad.
Caawa waxay ka dhigaysaa finalkii 13 aad ee ay soo istaagto, waxaanay raadinaysaa guushii ugu horeysay tan iyo sanadii 2002 oo ay Real Madrid noqotay horyaalka sanadkaas.
Sagaalka jeer ee hore ee ay ku guulaysatay ayaa kala ah 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 iyo 2002. Waxay sidoo kale Finalka yimaadeen oo laga qaaday sanadihii 1962, 1964 iyo 1981.
Atletico Madrid doorkan ayaa u noqonaya Final-kii labaad ee ay waligeed isa soo taagto. Markii koowaad ee ay timaado Final-na wuxuu ahaa sanadkii 1974 ciyaartaas oo ay barbar dhac 1-1 ah isla dhaafi waayeen Bayern Munich ooy ku wada ciyaarayeen magaalada Brussels, Laba cisho kadibna waxaa lagaga adkaaday 4-0, markaas oo noqonaysa taariikhda Champions League, ciyaartii koowaad ee laba naadi la isugu celiyo ciyaar kale.
Ciyaartani waa Final kii koowaad ee guud ahaan labada horyaal ee Yurub, European Cup iyo Champions League ee lagu ciyaarayo magaalada Lisbon tan iyo ciyaartii kooxda Celtic ay kaga adkaatay Inter Milan 2-1 garoonka National Stadium bishii May 25, 1967 sidaasna ay ku noqotay kooxdii ugu horeysay ee British ah ama woqooyiga qaarada Yurub ka dhisan ee hantida horyaal Yurub ah.
Francisco Gento oo Real u ciyaari jiray ayaa haysta Rikoodhka ciyaaryahanka ugu guusha badan , waxaanu ku guulaystay lix horyaal, waxaa ku xiga ciyaaryahanada Alfredo di Stefano oo Real ah iyo Paolo Maldini oo kooxda AC Milan u ciyaari jiray, kuwaas oo min shan goor hantiyey horyaalka Yurub. Goolwadaha kooxda Real Madrid, Iker Casillas ayaa markiisii saddexaad doonaya inuu ku guulaysto, waxaanu hore ugu soo guulaystay sanadihii 2000 oo ay ka qaadeen Valencia waxa kale oo uu bedel ku soo gallay xili ciyaareedkii 2002 oo ay ka qaadeen Bayer Leverkusen.
Sanadkii labaad ee xidhiidh ah, iyo guud ahaan Markii shanaad, ayay Final-kan ku tartamayaan laba kooxood oo isku wadan ka dhisan, laakiin waa markii koowaad eel aba kooxood oo isku magaalo ahi isugu soo baxaan Finalka Uefa Champions League.
Afartii kale ee ay laba naadi oo isku wadan ahi isugu soo hadheen ayaa kala ahaa, 1999-2000 markaas oo Real ay ku garaacday Valencia 3-0 magaalada Paris; 2002-03 markan oo AC Milan ay ku dubatay Juventus rigoodhayaal magaalada Manchester; 2007-08 markaas oo Manchester United ay kaga adkaatay Chelsea rigoodhayaal caasimada Ruushka ee Moscow iyo sanadkii aynu soo dhaafnay oo ay Bayern Munich kaga qaaday Borussia Dortmund 2-1 magaalada London.
Atletico iyo Real waxay isgaa hor yimaadeen 194 jeer horyaalka iyo koobka Spanish-ka, Real waxay guushu raacday 102 goor, halka ay Atletico 46 jeer guulaysatay, waxaanay barbaro galleen 46 jeer.
Fabregas Oo London Gaaf-wareegaya Iyo United Oo Meel Kuuma Hayno Ku Tidhi
Taageerayaasha Everton oo Hees Iyo Orin Isugu Daray David Moyes + Caydii Qaawanayd Ee Uu Ku Yidhi Mid Kamid Ah Difaacyahanadiisa Iyo Khalkhalkii Man United Qabsaday
Mustafe Cirid: “Marxuum Cumar Saalax Wuxuu Ahaa Saaxiib Qaali Ah Iyo Ciyaartoy Farsamadiisu Sareysay”
04/04/2016 Samatar Mohamed
All Rights Reserved Copyright©Cadalool.com